ह्वात्तै घट्यो सुनको भाउ, किन्ने होइन त सुन ? – Tufan Media News
ह्वात्तै घट्यो सुनको भाउ, किन्ने होइन त सुन ?
२२ श्रावण २०७८, शुक्रबार ११:५४
काठमाण्डाै – सुनको भाउ आज पाँच सय रुपैयाँले घटेको छ । हिजो तोलामा ९२ हजार रुपैयाँ रहेको सुनको भाउ आज ९१ हजार ५ सय रुपैयाँमा झरेको छ ।
अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा आएको उतारचढावकै कारण भाउ घटेको नेपाल सुन चाँदी व्यवसायी महासंघले जनाएको छ । महासंघका अनुसार अहिले अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा सुनमा भन्दा शेयर बजारमा आकर्षण बढ्दो छ । यसले गर्दा सुनको भाउ फेरि पनि घटबढ हुन सक्ने अनुमान छ । तर अहिले ]पर्ख र हेर’को अवस्था रहेकाले यसै भन्न नसकिने व्यवसायीले बताएका छन् ।
यसैबीच, आज चाँदीको भाउ पनि घटेको छ । चाँदीको भाउ आज तोलामा आज १२ सय ६५ रुपैयाँ छ ।
यो पनि : भुटान सरकारले दिएको एस्ट्राजेनेका खोप काठमाण्डाै आइपुगेको छ । भुटानको ड्रुक एअरलाइन्सको विमानले बिहान ९ बजे त्रिभुवन विमानस्थलमा खोप ल्याएको हो ।
भुटानले तीन लाख डाेज खोप उपलब्ध गराउने घोषणा गरेको थियो । घोषणा अनुसारको खोप आए नआएको निश्चित भने भएको छैन । अहिले १४ लाख भन्दा धेरै ज्येष्ठ नागरिक कोभिसिल्डको पर्खाइमा छन् । जापानबाट भोलि र पर्सि आइपुग्ने खोप र भुटानबाट आएको खोप कोभिसिल्डको पहिलो मात्रा लगाएर दोस्रो मात्राको पर्खाइमा रहेका ज्येष्ठ नागरिकलाई दिने सरकारको तयारी छ ।